राष्ट्रियसभामा वरिष्ठ नेताहरु आउनाले यसको ओझ र गरिमा बढ्ने नै छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना » Chitwan Samachar - चितवन समाचार
रासस | २ आश्विन २०७७, शुक्रबार १३:५३ |
विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा होमिनुभएका उहाँसँग गण्डकी प्रदेशका पर्वत, बाग्लुङ र मुस्ताङ जिल्लामा राजनीतिक नेतृत्व तथा तत्कालीन गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिमा जनप्रतिनिधिका रुपमा नेतृत्व गरेकोसमेत अनुभव छ । पाँचौ संविधान दिवसका सन्दर्भमा अध्यक्ष तिमिल्सिनासँगकाे संवादको सम्पादित अंशः
अब क्रमशः हुँदै जाला । हुन त यो संविधानपछिको पहिलो कार्यकाल पनि हो । मौलिक हकका व्यवस्थाहरु क्रमशःकार्यान्वयन हुँदै जान्छन् । मौलिक हकमा मुख्यतः आधारभूत गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हुन् । यिनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मुलुकको आर्थिक समृद्धि पनि त्यहीरुपमा हुनुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले जुन समृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, यसको कार्यान्वयन हँुदै जाँदा ती हकहरुको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ मुलुक अघि बढ्ने विश्वास लिएको छु ।
राष्ट्रियसभाका हिसाबले त प्रदेश र स्थानीय तह हाम्रा मतदाता नै हुन् तर सङ्घले मात्रै बजेट दिने भन्ने होइन । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना क्षेत्रभित्रको केकति बजेट सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । राजस्व सङ्कलन कति र कसरी गर्न सकिन्छ, स्थानीय स्रोतको उचित उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा अब समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । ती सरकारहरु आफैँ बजेटको दायरा बढाउन लाग्नुपर्छ । माथिबाट पनि बजेट बढी पठाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ त प्रदेशका गुनासा सङ्घसँग छन् ।
प्रदेशमाथि पनि स्थानीय तहका गुनासा छन् । यी सबै सरकार संविधानपछिको पहिलो कार्यकालका भएकाले बजेट व्यवस्थापनमा उचित नीति, अभ्यास र विधिमा जान समय लागेको हुन सक्छ । हुन त, सङ्घीय सांसद्ले पनि बजेट चलाउनुभएको छ । उहाँहरुमा अझै मतदाताका बीचमा आफैँ लगेर बाँड्न पाए हुन्थ्यो, मैले दिएँ भन्ने पथ्र्याे भन्ने पुरानो मानसिकता कायम छ । यसमा नयाँ मानसिकता र भावना विकास होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
यसमध्ये दुवै सभाबाट पारित भई १६ वटा प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता आउन बाँकी ६ विधेयक छन् । सभामा तीन र सभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा १० विचाराधीन छन् । गुठी विधेयक फिर्ता भएको छ । हालसम्म सभामा तराई–मधेशको हुरी, बतास र कोभिड –१९ रोकथामबारे समसामयिक विशेष प्रस्ताव, नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादबारे सङ्कल्प प्रस्ताव र तीन विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित भएको छ । चार महत्वपूर्ण विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको संवैधानिक व्यवस्था, यसको गरिमा र महत्व अझै बढाउन के गर्नुपर्ला ? प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा पराजित केही नेताहरु अर्काे प्रक्रियाबाट यस सभामा आउनुभएको छ, यसबारे विभिन्न टिप्पणी पनि भएका छन्, यसमा यहाँको प्रतिक्रिया ?
वास्तवमा राष्ट्रियसभाको विशिष्ट चरित्र र भूमिका छ । यसमा व्यक्तिहरुको छनोट गर्दा राजनीतिक योगदान, उमेर, वर्ग, विभिन्न पेशा, बौद्धिकता आदि सबैको मिश्रण हुन्छ । अहिले त्यहीअनुसार प्रतिनिधित्व छ । राजनीतिमा कुनै एक चुनाव हार्नु भनेको सबै चिज होइन । खास प्रयोजन र अवस्थामा मतहरु तलमाथि पर्न सक्छन् तर यसको अर्थ ती नेता सँधैभरि असक्षम वा काम गर्न नसक्ने भएका हुन् भन्ने हुँदैन । हारे पनि उहाँहरुले राजनीतिक काम गरिरहनुभएकै छ ।
देश र जनताकै लागि काम गरिरहनुभएको छ भने विधि र प्रक्रियानुसार उहाँहरु फरक भूमिकाको जिम्मेवारीमा आउन सक्नुहुन्छ । राष्ट्रियसभामा विगतमा प्रत्यक्ष चुनाव नलडेका पनि धेरै आउनुभएको छ । बाहिर रहेकामध्येबाट आवश्यक परेकालाई यसमा ल्याउन पनि सकिन्छ । यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन । राष्ट्रियसभामा वरिष्ठ नेताहरु आउनाले यसको ओझ र गरिमा बढ्ने नै छ । यसलाई प्रधानमन्त्री हुन तयार वा योग्य खालका नेताहरुको रुचि र आकर्षणका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
यसले राष्ट्रियसभाको महत्व बढाएको छ । उहाँहरु भोलि फेरि अर्काे ठाउँमा निर्वाचन जित्न सक्नुहुन्छ । कतिपय प्रदेशबाट जितेर आउनुभएको छ । मनोनीत भएर आउनु भनेको पनि मन जितेर आउनु हो । सरकारले आवश्यक नठानी मनोनयन सिफारिश गर्दैन भन्ने विश्वास पनि गरौँ । त्यसकारण उहाँहरुले एक पटक निर्वाचन हार्नुलाई अपराधै गरेको वा सर्वनाक हार थियो भनिनु हुन्न ।
संविधाको मर्म त्यही हो । जनतालाई परिणाम दिने तथा बजेट र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा एक प्रकारको हुटहुटी देखिन्छ, सबै मन्त्रीमा त्यही गति आवश्यक छ । साँच्चै समाजवादमा जान सक्ने आधार तय गर्नुपर्छ । देश समृद्ध नभएसम नागरिक खुशी हुन सक्दैनन् । समृद्धि हासिल गरेर जनतामा विनाभेदभाव त्यसका लाभहरु न्यायोचितरुपमा वितरण गर्न सक्नुपर्छ । हामी दोहोरो अङ्कको आथिक वृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढिरहेका बेला कोरोना सङ्कटबाट तङ्ग्रिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
रास्ट्रिय समाचार समितिका प्रकाश शिलवालले गर्नुभएकाे कुराकानी